भाइरल बनेकी कुशुम श्रेष्ठलाई लेखे एक युवकले कारुणिक खुल्ला पत्र » Khulla Sanchar
भाइरल बनेकी कुशुम श्रेष्ठलाई लेखे एक युवकले कारुणिक खुल्ला पत्र
नमस्कार कुशुम जि।
तपाइका बारे अनलाइन खबरहरुमा अन्यौलताले भरिएका टिप्पाणी र खबरहरु छाए पछि मलाई पनि मनमा लागेका केही कुराहरु भन्न मन लाग्यो। मानवताको नाताले भावनात्मक रुपमा यो सन्देश सम्प्रेषण गर्दै छु। बोल्दै जाद कहि गलत भए छ भने क्षमा चहान्छु।
विगत ४-५ दिन देखि दक्षिण एसिया भरी नै ‘तरकारीवाली’को नाम बाट भाईरल भएको तपाइको तस्बिर मेरो नजरमा पनि भाइरल बनेर हिज मात्र प्रबेश गर्यो।
एक्छिन् त सोचेँ, बिचर गाउकी सोझी केटिको तस्बिर कुन चाहिँ लफङ्गोले फेसबुकमा हाली दिए,
तर भारी बोकेर झुलुंगे पुल तर्दै गरेको त्यो तस्बिरले मेरो सोचाइ त्यतिमा मात्र सिमित राखेन्। किनकी त्यो तस्बिरले धेरै सन्देश बोकेको थियो। कलिला उमेर देखि नै नेपालीहरु कति लगनशील हुन्छ भन्ने त्यो तस्बिर बाट यकिन गर्न सकिन्छ। अझ भनौ बर्तमान नेपाली समाजमा अरुको कमाइ बाट रमाउनेहरुका लागि पनि गतिलो झापड हो।
एकाएक चर्चामा आएकी तरकारी वाली कुशुम” भन्दै धेरैले सेयर गरेको देखे पछि मलाइ पनि तपाइको बारेमा बुझ्ने ईक्षा जाग्यो।
म ड्युटिमा रहदा पनि तपाइका बारेमा लेखिएका लेख समाचारहरु खोजी खोजी पढ्न थालेँ।
कोहि लेख्छन् भाईरल बनेको कुशुम भन्छे मोडल बन्न चहान्छु त कोहि लेख्छन् तरकारी वाली भन्ने फिल्म खेल्छु भनिन्, ।
एक थरी लेख्छन् कुशुमले अब कसैलाई तस्बिर खिच्न नदिने अरे।
यस्तै यस्तै अनेकन समाचारहरु देखे पछि म स्वयं आश्चर्य चकित भै रहेको बेला न्युज 24का एकजना पत्रकारले तपाईं संग लिएको अन्तरबार्ता र बरिस्ठ सञ्चारकर्मी सबीना कार्की संगको टेलिफोन अन्तरबार्ता पनि सुन्न भ्याएँ।
सोही अन्तरबार्ता बाट मैले सुने तपाइको ईक्षा नर्सिङ पढ्ने थियो। तर आर्थिक अभावका कारण म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुदो रहेछ।
यी कुराहरु सुनी सके पछि यति लेख्ने चेष्टा गरेको छु।
तिनै तस्बिरहरू बाट चर्चित भै सके पछि तपाइलाइ धेरै अवसरहरुको ढोका खुलेको छ। अवसर दिन्छु भन्दै तपाइलाइ सम्पर्क गर्नेहरु थुप्रै होलान् पनि। यसमा बधाई दिन म कत्ती कजुस्याई गर्दिन।
तर ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ कि तपाइलाइ अवसर दिन्छु। मोडलिङ गर, फिल्ममा लगाइ दिन्छु भन्नेहरु मात्र आए कि तपाइको ईक्षा आकांक्षा, चाहाना र भाबी योजनाहरु बुझ्नेहरु आए?
तपाइलाई थाहा छ कुसुम जि। यहाँ बाहिर अवसरको ढोका खोलेर बस्नेहरु भित्र स्वार्थको झोला भिरेर बसेका हुन्छन्।
बिचार गर्नुस् तपाइलाई अवसर दिन्छु भन्नेहरुले तपाइले गरेको कर्म प्रती कत्तिको सहानुभूति देखाए।
तपाइको सुन्दरतालाई हेरेर अवसर दिन्छु भन्नेहरु आए या तपाइमा क्षमता छ भन्ने यकिन गरेर आए??
यौटा गुमनाम ठाउँको मान्छेले अनायसै यति धेरै चर्चा पाउनु त्यो साह्रै खुसिको कुरा हो।
तर यहाँ स्वार्थका झोला भिरेर बस्नेहरुले तपाइको सुन्दरतालाई मात्र हेरेर चलचित्र अथवा मोडलिङ्ग तर्फ खिच्ने प्रयास धेरै भएको छ।
मैले ईष्र्याले यसो भनेको हैन। म यहि समाजमा खेले हुर्के भोगेँ अनि यहाको चालचलनको बारे थाह पाएँ त्यसौले भावनात्मक रुपमा यो सन्देश मार्फत बोल्दै छु।
र यहि सन्देश मार्फत भन्न चहान्छु।
जुन लक्ष लिएर अघि बढ्नु भएको छ त्यो लक्ष पूरा गर्नुस्
तर सफलता मिलेन भनेर हारेस कहिल्यै नखानुस्,
बदल्नु परे बाटो बदल्नुस् सिधाान्त कहिल्यै नबदल्नुस्।
तपाइको बारे अनलाईन मिडियामा छाएको रौनकता नै तपाइले लिनु पर्ने सहि निर्णयको मुख्य केन्द्र बिन्दु हो।
यहाँ तपाइको लागि धेरै बाटोहरु छन् धेरै ढोकाहरु खुलिएका छन्।
तपाइले कतिपय ठाउमा मोडलिङ्ग गर्ने ईक्षा छ भनेर बोली सक्नु भएको हो कि हावादारी समाचार आएको हो यो भने थाहा भएन ।
तर चर्चामा आए पछि तपाइले मोडलिङ्ग वा चलचित्रमा नै खेल्नु पर्छ भन्ने छैन।
पढाइलाइ अथवा सानै देखि नर्सिङ पढ्ने रहरलाइ पनि पूरा गर्न सकिन्छ।
मोडलिङ्ग बनाइ दिन्छु भन्नेहरुले नर्स कसरी बनाउन नसक्ला र? यो यौटा चुनौती दिने कुरा पनि हो।
यस अर्थमा मैले मोडलिङ्ग जगत नराम्रो हो भन्न खोजिएको भने हैन।
मैले त केवल चर्चामा आएकी चेलिले समाजको लागि पृथक सन्देश दिएर अघि बढ्नु मात्रै भन्न खोजेको हुँ।
किन भने यहाँ जति पनि चर्चामा आएकाहरु देखिए प्रायः पर्दामा नाटक गर्न पुगे, तपाईं पर्दा पछाडीको असली हिरो बन्नु पर्छ।
किनकी पर्दामा नक्कल पार्नेहरु हुन्छ अभिनय गर्नेहरु हुन्छ।
तर पर्दा पछाडीकाहरु यथार्थ बोकेर हिडेका हुन्छन्।
यथार्थको जिन्दगीमा रमाउनुस् तपाइलाइ मेरो शुभकामना छ।
मन गुरुङ माइला भिरकोट ३ पखेरे स्याङ्जा
हाल मरुभूमि र युद्धले पिल्सिएको देश इराक बाट